Waaheen Media Group » Baar Tuunisiya ku Yaal oo isku Dhex daray Aadaanka Salaada iyo Muusik oo la Xidhay
Browse:Home Articles Baar Tuunisiya ku Yaal oo isku Dhex daray Aadaanka Salaada iyo Muusik oo la Xidhay	Baar Tuunisiya ku Yaal oo isku Dhex daray Aadaanka Salaada iyo Muusik oo la Xidhay
Comments Off	Baar ku yaalla Tunisiya ayaa albaabada loo laabay ka dib markii la arkay muuqaal muujinaya aadaan loo daaray dad qoob ka ciyaar dheelaya, sida ay saraakiishu sheegeen.
Muuqaalkan oo laga duubay magaalada Nabeul ee ku taaalla waqooyiga bari ee dalka Tunuusiya ayaa la soo bandhigay Axaddii, dad badan oo ka cadhooday arrintaas ayaa dareenkooda ku soo gudbiyay baraha ay bulshadu ku xidhiidhaan.
Gafarnatooraha Nabeul, Mnaouar Ouertani ayaa sheegay in baarku uu sii xidhnaandoono ilaa iyo amar dambe.
Baadhitaan arrintaas la xidhiidha ayaa la billabaay Muuqaalka la helay ayaa muujinaya dad baar jooga oo qoob ka ciyaar dheelaya, kuwaas oo ay muusik u daarayaan labo ruux oo reer galbeed ah, halkaas oo u dhaw goobta loo tamashle tago ee Hammamet oo xeebta agteeda ah.
Muusikada ayaa lagu daray aadaanka salaadda. Ouertani ayaa sheegay in markii ay dhacdadaas xaqiijiyeen ay go’aansadeen in ay albaabada u laabaan baarka. Wuxuu intaas ku daray in ay xabsiga la dhigay maamulihii baarka wuxuuna sheegay in baadhitaanno ay socdaan. Qoladii soo abaabushay ayaa raaligalin soo galiyay facebook, laakiin waxay sheegeen in aysan qaadaynin masuuliyadda daaridda muusiggii dhib keenaya. Qofkii daaray ayaa raaligalin bixiyay wuxuuna sheegay in uusan marnaba uga gol lahayn in uu qof ku xumeeyo.